Traintravel မော်ကွန်း | စာမျက်နှာ7၏ 15 | တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ နယ်သာလန်ဘုရင်၏နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောကောင်းစွာဟော်လန်မှာအကောင်းဆုံးပါတီဖြစ်နိုင်သည်. အပေါ် 27 ဧပြီလ, သူတို့ဂီတနှင့်အတူဘုရင်က Willem-Alexander ကရဲ့မွေးနေ့ကျင်းပ, လမ်းပေါ်ပါတီများ, ခွေးလှေးစျေးကွက်, နှင့်ပျော်စရာဝိုင်း. ရှငျဘုရငျကိုကိုယ်တော်တိုင်သူ့မိသားစုနှင့်အတူတိုင်းပြည်ကတဆင့်ခရီး. On the night before…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ လူတိုင်းပူနွေးသောရာသီဥတုများအတွက်နွေဦး၏အိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ်. ဆောင်းရာသီ၏နှင်းကျသောနွေ ဦး ရာသီ၏သက်တမ်းတိုးများအတွက်လမ်းစေသည်သည့်အခါဒါဟာဥရောပ၌အစဉ်အမြဲလှပသောအချိန်ပါပဲ. ပန်းခြံများနှင့်ဥယျာဉ်အသက်ရှင်လျက်လာများနှင့်မြို့ကြီးများသို့တဖန်ဘဝပြန်လာ. နွေဦးရာသီ၌ဥရောပတိုက်တွင်ခရီးသွားလာ, ရှေ့…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ တစ်ဦးကဥရောပလမ်းကြောင်း Planner ကဥရောပတလွှားကသင်၏ရထားခရီးစည်းရုံးရေးအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ကျော်ရှိပါတယ် 10,000 တဦးတည်းဥရောပတိုက်တွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နေရာများ. ခရီးစဉ်၏နံပါတ်ကြောင့်, သင့်ရဲ့ခရီးသွား map ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာရန်အရေးကြီးပါသည်က. သငျသညျဖြစ်ကောင်းချင်…